iTunes Tag: Olee otú iji Kpido Your Songs na iTunes
> Resource> iTunes> Olee otú iji Kpido Your Songs na iTunes
Isiokwu a na-ewebata ihe bụ iTunes mkpado, na otú ị nwere ike idezi ya na iTunes, ma ọ bụ iji mpụga iTunes mkpado nchịkọta akụkọ.
Gịnị bụ iTunes Tag?
iTunes mkpado, na-akpọ iTunes ID3 mkpado, bụ metadata ma ọ bụ ozi dị ka omenkà, album, genre, afọ na na. Na iTunes, na mkpado na-tumadi-eji na-categorize gị music,-egosipụta ozi maka faịlụ, idozi faịlụ na-eji site Smart Playlist.
iTunes Wuru na-Tag Editor
Edezi mkpado na iTunes bụ nnọọ adaba. Kpọmkwem mata a song na pịa otu ugboro iji edezi mkpado otu otu. Plus, iTunes-enye gị ohere dezie mkpado informations na wuru na-Ama nchịkọta akụkọ. Iji nweta ya, nri pịa na faịlụ na ị chọrọ dezie metadata, na họrọ Get Info (ma ọ bụ nnọọ pịa Wụk + m na keyboard).
Atụmatụ: na nkụzị ubi na-akpan-eji otu songs maka ike listi ọkpụkpọ. Ka ihe atụ, ị nwere ike ịmepụta a Smart Playlist n'ịwa a ndepụta na dị nnọọ e dere ihe na songs na "Oldies" nkụzị ọmụma.
Tag Dezie Multiple Songs na iTunes
Ị nwekwara ike idezi mkpado nke otutu songs. Ọ bụ yiri edezi mkpado nke a otu faịlụ. Ihe dị iche bụ iji họrọ multiple faịlụ n'ihu ohere Get Info iwu. Ị nwere ike jide iwu ma ọ bụ Mgbanwe isi na pịa ka họrọ multiple faịlụ, ma ọ bụ na-eji Wụk + A iji họrọ faịlụ niile.
Atụmatụ: Ọ bụrụ na ị chọrọ ikpochapụ ihe iTunes mkpado dị ka ikwu, mfe uncheck igbe tupu comment ederede ubi ma họrọ OK itinye faịlụ ndị ahọrọ.
Mpụga iTunes Tag Editor
The mkpado dezie iTunes mgbe ụfọdụ adịghị e zọpụta na mbụ faịlụ, otú ọ na-arụ ọrụ na ndị ọzọ omume. Ọzọkwa, ọ bụghị dị ka ndị dị ike dị ka ụfọdụ mpụga mkpado editọ. Ebe a na-abịa ọzọ mkpado editọ iTunes. Ihe m na-atụ aro ebe a bụ free iTunes mkpado nchịkọta akụkọ a na-akpọ MusicBrainzPicard nke na-eji ihe album na-agba mbọ obibia ịnweta MusicBrainz nchekwa data iji na-akpaghị aka ịkpado faịlụ egwu gị n'ụzọ ziri ezi.
Ebe a bụ ihe ọzọ na mpụga iTunes mkpado nchịkọta akụkọ, naanị a mma. Ọ na-akpaghị aka okụt ọmụma maka gị niile music faịlụ ma na-enyere ọcha gị iTunes n'ọbá akwụkwọ site gwara mislabeled songs na wepụ duplicates. Mụtakwuo >>